Siri Remote dia tsy ho hita afa-tsy amin'ny firenena 8 | Vaovao IPhone
Siri Remote dia tsy ho hita any amin'ny firenena 8 ihany
Isaky ny manao famoahana vaovao i Apple, mahatratra vondron-firenena sy olon-kafa ny serivisy, toa an'i Espana, mila miandry amam-bolana maro isika na mihoatra ny herintaona aza vao afaka mankafy ilay zava-baovao. Apple Pay, iTunes Radio na Siri dia ohatra amin'izany. Fa raha ny baiko hifehezana ny Apple TV andiany faha-XNUMX tsy hitranga araka ny hisy izany Firenena 8 azon'izy ireo atao mampiasa Siri Remote, anisan'izany i Espana, hatramin'ny voalohany.
Ny olana dia tonga amin'ny firenena sisa, satria azo antoka fa fonosana no ahafahan'izy ireo mividy izay a Apple lavitra, lavitra mahazatra ampiasaina hatramin'ny taranaka fahatelo amin'ny Apple TV. Inona no dikan'izany? Raha mijery ny tongotra telo amin'ny saka rehetra aho dia misy hevitra tonga ao an-tsaiko, fa tsy haiko raha misy dikany be izany.
Ireo firenena izay hahazo Siri Remote
Ireo firenena valo etsy ambony no nipoitra tao amin'ny vavahadim-pivoarana satria isika irery no handray ny fanaraha-maso vaovao amin'ny alàlan'ny mikrô ary hahafahantsika mampiasa baiko am-peo hifehezana ny fahitalavitra. Ny sisa amin'ireo firenena dia hanana bokotra ahafahan'izy ireo mitady atiny fa tsy ny bokotra Siri. Rehefa manery ny bokotra "karoka" ny mpampiasa iray amin'ny firenena tsy misy an'i Siri Remote, a fampiharana fikarohana, angamba toa ilay ao amin'ny iOS 9.
Mazava ho azy, tsy ho azoko hoe marina izany raha tsy mora ny vidiny, saingy mieritreritra aho fa tsy izany no izy. Mety ho, amin'ny ho avy, ireo mpampiasa izay tsy mipetraka amin'ny firenena amin'ny lisitra teo aloha dia afaka mampiasa Siri rehefa tonga ny fotoana, fa ny tolo-kevitro dia hoe aza mividy Apple TV ny taranaka fahefatra mandra-pahazava izany rehetra izany. Azo inoana fa ho fantatry ny mpamorona raha mifanaraka amin'ny Siri ny fifehezana miaraka amin'ny "bokotra fikarohana", noho izany dia ilaina fotsiny ny miandry fanavaozana, na raha tsy izany, ny Siri Remote dia mila mividy ao ny ho avy, miaraka amin'ny fandaniana fanampiny izay midika izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple tv » Siri Remote dia tsy ho hita any amin'ny firenena 8 ihany
Miguel Fabian dia hoy izy:
Ary inona no hitranga raha tsy ao anatin'ny lisitry ny firenena aho ary mividy iray, ohatra any Etazonia, dia tsy handeha ny Siri?
Valiny tamin'i Miguel Fabian
Amin'ny voalohany dia mety izany, fa ho hitanao kosa fa hosakanan'ny Apple izy io avy eo. Tsy miraharaha an'i Siri aho, miaraka amin'ilay appstore dia faly kokoa aho, afaka manary ny vcr, blu ray ary dvd 😀
(@Feranmx) dia hoy izy:
Hadalana lehibe izany, ny hany zavatra hanavotra izany, dia ny fahafaha-mifehy ny tv paoma amin'ny iphone na fitaovana paoma hafa ... raha tsy izany dia tsy hitako ny tranga hividianana azy.
Mamaly an'i El Inge @ (@feranmx)
** Tsy mahita tranga hividianana azy aho amin'izao fotoana izao, mila miandry isika.
Nanchesman dia hoy izy:
Mahatonga ahy ho incongruous fa misy any Espana izy io ary tsy miseho any Mexico raha mitovy fiteny io
Valiny tamin'i Nanchesman
Pobretolo dia hoy izy:
Tsy mitovy ny fiteny, amin'ny fomba fanehoana ny heviny ary, mazava ho azy, ny fomba fanononana azy dia tsy mitovy. Ny Espaniola dia miteny any Espana, ary ny Espaniola kosa any Amerika Latina.
Valiny tamin'i Pobretolo
Osiris Armas Medina dia hoy izy:
Gaga aho amin'ny tsy fisian'i Italia ho firenena manan-danja toy izany any Eropa.
Valiny tamin'i Osiris Armas Medina
Malala !!! Na any Espana na any Mexico ary ny sisa amin'ireo firenena amerikanina latina, CASTELLANO dia tenenina, tsy misy ny teny espaniola.
Mpahay fiteny. dia hoy izy:
Marina izany, ny teny ofisialy dia espaniola, afa-tsy ny any amin'ny firenena latinina dia nijanona ny fivoaran'ny Espaniola taona maro lasa izay, ka niteraka ny Espaniôla tsy ankehitriny, izay tany Amerika Latina dia nampiditra teny avy amin'ny teny anglisy avaratra amerikana, nahatonga ny fangaro izay tsy mampifanaraka ny fampiasana mpanampy toy ny siri.
Valiny ho an'ny mpandinika ny fiteny.
joaguilar dia hoy izy:
Andao hojerentsika «oh, mpandinika fiteny lehibe» ahoana no nahatonga ahy «tsy nijanona» teo amin'ny fomba fiteniko, raha miteny aminao aho hoe «mandehana manadala ny reninao» ho azonao ve aho? … Clown
Mamaly an'i joaguilar
Toa tsy mampino fa natao ho fandikan-dalàna io. Raha tsorina, ny kabarin'i Amerika Latina dia mitovy amin'ny Espaniôla Espaniola taloha, mifangaro amin'ny findramam-bola vitsivitsy avy amin'ny teny anglisy amerikana, tsy zavatra ratsy na inona izany; hafa ihany io.
Mazava ho azy fa mifankahazo isika, samy manana ny filazantsika fotsiny ny hevitsika, ary izany no antony tsy anohana an'i Siri.
iPhone 6s sy 6s Plus raha ampitahaina amin'ny sainam-pirenena hafa [specs]